BBC Somali - Warar - AMISOM oo waqtiga loo kordhiyay
AMISOM oo waqtiga loo kordhiyay
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 9 Novermber, 2012, 23:48 GMT 02:48 SGA
Ciidanka Midowga Afrika waxa ay Soomaaliya ka hawlgalayeen ilaa 2007
Golaha ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa muddo afar bilood ah ku kordhiyay hawgalka ciidamada Midowga Afrika AMISOM, oo dhawaan waqtigoodi uu dhammaaday.
Go'aankan kordhinta xilliga hawgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya ayaa waxa uu ku soo beegmay iyadoo dhawaan dalka Uganda uu ku hanjabtay inay ciidamadiisa uu kala baxayo Soomaaliya iyo meelaha kale ee Afrika ee ay ka hawlgalaan, taasi oo ayay sabab uga dhigeen hadal QM ay ka soo saartay Uganda, oo lagu eedeeyay inay ku lug leedahay dagaalka Congo.
Ciidamada Midowga Afrika ee Soomaaliya ayaa waxa hawlgalkoodu bilowday sanadkii 2007, markaasi oo dowladdii KMG ee Soomaaliya ay codsatay.
Inta badan ciidanka AMISOM waxa ay ka kala socdaan dalalka, Uganda, Burundi, Djibouti iyo Kenya oo dhawaan ku biirtay AMISOM, waxaa kale oo jira ciidan booliis ah oo ka socda dalal kale oo Afrika ah sida Nigeria.
Ciidanka Midowga Afrika ayaa waxa ay dagaal kula jiraan kooxda al-Shabaab ee Soomaaliya.
Siyaasadda NATO oo la socon doonto xaaladda Ukraine
11 Maarso 2014
Magaalooyinka la qabsaday oo laga qaxay
10 Maarso 2014
NATO oo la socon doonto xaaladda Ukraine
Diyaaraddii Malaysia "waa la la'yahay"